နေ့ခင်းတစ်ရေးအိပ်ကြမယ် - Page7of9- Hello Sayarwon
ထမင်းစားပြီးသွေးလေးလိုက်တာ၊ အိပ်ချင်လာပြီလို့ ခံစားနေရတာကို တင်းခံနေမယ်လို့များတွေးနေလား။ တင်းခံမနေပါနဲ့။နေ့လယ်ခင်း အိပ်ချင်လာရင် အိပ်သာအိပ်လိုက်ပါ။ အိပ်စက်မှုက ကလေးတွေအတွက်ရော လူကြီးတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေတဲ့အရာပါ။နေ့ခင်းဘက်မှာ နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက် အိပ်စက်မှုက ဦးနှောက်အတွက်ရော၊ ကိုယ်ခန္ဓါအတွက်ပါအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရနေ့ခင်းဘက်မှာ အိပ်စက်တာက မှတ်ဉာဏ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ သတိမေ့တာမျိုး၊ နှုတ်ဖျားလေးတင်မေ့နေတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်နေ့လယ်ခင်းအိပ်စက်ပေးပြီး ဦးနှောက် စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးပါ။
နေ့ခင်းအိပ်စက်မှု ခန္ဓါကိုယ်ကို ခွန်အားပြည့်စေပြီး ခန္ဓါကိုယ် လှုပ်ရှားမှုကိုပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေ့ခင်းပိုင်းမှာ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၂၀ ခန့်အိပ်စက်ပေးပါ။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကို အားပြန်သွင်းပေးရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီး ခဏလောက်တော့ အိပ်စက်အနားယူပေးပါ။
နေ့ခင်းပုံမှန်အိပ်စက်တဲ့သူတွေက စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကနေ ကင်းဝေးကြပါတယ်။နေ့ခင်း ၁ နာရီ ကနေ ၃ နာရီအတွင်းမှာ တစ်ရေးလောက်အိပ်တာက တစ်နေ့တာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။နေ့ခင်းပိုင်းမှာ နာရီဝက်လောက် အိပ်စက်မှုက စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပြီး အာရုံစိုက်မှုကို ပိုကောင်းစေနိုင်မှာပါ။
နေ့ခင်းဘက်မှာ တစ်ရေးလောက် အိပ်ရေးဝဝအိပ်တာက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကိုနေ့ခင်းပိုင်းမှာ မိနစ် ၃၀လောက်အိပ်စက်ပေးပါ။ ဖျားနာမှုကင်းဝေးပြီးပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ညဘက်အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါနောက်တစ်နေ့မှာ အလုပ်တွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ မကြည်သာတာမျိုးလည်းဖြစ်ဖူးမှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့နေ့ခင်း တစ်မှေးလောက်အိပ်လိုက်တာပါပဲ။ ကဖင်းပါတဲ့ အရာတစ်ခုခုကိုသောက်တာထက်နေ့ခင်းတစ်မှေးအိပ်လိုက်တာက စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေဖို့ ပိုပြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာလည်းရောက်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ၄၅ မိနစ် ၁ နာရီခန့်အိပ်စက်သူတွေဟာသွေးဖိအားအခြေအနေကောင်းမွန်ကြပြီး နှလုံးကျန်းမာကြတယ်၊လို့လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးကျန်းမာချင်ရင်တော့နေ့ခင်းပိုင်း ၁ နာရီ ကနေ ၃ နာရီအတွင်း ၄၅ မိနစ်လောက် သက်တောင့်သက်သာလေးအိပ်စက်ပေးပါ။
နေ့ခင်းဘက်အိပ်ရင် ညဘက်အိပ်ပျော်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။နေ့ခင်းဘက်အိပ်စက်တာက ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေ့ခင်းပိုင်းမှာ တစ်မှေးလောက်တော့မှေးလိုက်ပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါကျန်းမာစေဖို့နေ့ခင်းတစ်မှေးလောက်တော့မှေးလိုက်ပါ။
နေ့လယ်ခင်းမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်မှုက တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်စက်မှုက ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာပါ။
ဒီတော့နေ့ခင်းဘက် အိပ်မလား၊ မအိပ်ဘူးလားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနော်။ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ……..
Health Benefits of Nappinghttps://www.webmd.com/a-to-z-guides/ss/slideshow-health-benefits-of-napping Accessed Date3January 2019
NAPPINGhttps://www.sleepfoundation.org/sleep-topics/napping/page/0/3 Accessed Date3January 2019
Surprising waysaquick snooze is good for youhttps://www.sleep.org/articles/napping-health-benefits/ Accessed Date3January 2019
Guilty about that afternoon nap? Don’t be. It’s good for youhttps://coach.nine.com.au/2018/01/29/09/17/afternoon-nap-health-benefits Accessed Date3January 2019